Qalbi jaban ma ku caawin karaa Kansarka? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Qalbi jaban ma ku caawin karaa Kansarka?
WEDNESDAY, July 17, 2019 (HealthDay News) - "Cudurka wadnaha ee qalafsanWaxaa laga yaabaa inay waxyeelo u geysato wax ka badan kaliya wadnaha, cilmi-baaris cusub ayaa soo jeedinaya.
In kasta oo xad dhaaf ah stress ee luminta qof aad jeceshahay wadnaha Daraasad hore, daraasad cusub ayaa lagu ogaadey in lixdii qofba mid ka mid ah dadka qaba xannuunka wadnaha uu jabsaday sidoo kale ay qabaan kansarka. Xitaa ka sii darane, waxay u badan tahay inay ka badbaadaan kansarkooda shan sano kadib.
Qoraaga sare Dr. Christian Templin ayaa yidhi: "Waxaa jira wada shaqeyn xoog leh oo ka dhaxaysa cudurka 'Takotsubo syndrome [qalbi jabka wadnaha] iyo qaldanimada'. Wuxuu agaasime ka yahay daryeelka caafimaadka wadnaha ee daran Isbitaalka Jaamacadda Zurich ee Switzerland.
"Sidaa darteed, waa in lagula taliyo bukaanka cudurka 'Takotsubo syndrome' inay ka qeybqaataan baaritaanka kansarka si kor loogu qaado badbaadada guud," ayuu yiri, isagoo raaciyay in tan kale ay run tahay. Hadana, daraasadu ma cadeyn in mid sababa kan kale.
Xanuunnada wadnaha ee jaban ayaa keena deg-deg deg deg ah laab xanuun iyo neefsashada oo gaaban oo khaldami karta a wadne istaag. Astaamahani waa jawaab-celin ka yimaada deg-degga walaaca hormoonka, sida laga soo xigtay Ururka Wadnaha Mareykanka (AHA).
Xaaladda waxay sababtaa in wadnuhu fido, cilmi-baarayaashu waxay yiraahdeen. Taasina waxay ka dhigan tahay in wadnuhu aanu si wax ku ool ah u abuuri karin dhiigga.
Xanuunnada wadnaha ee jaban ayaa dhici kara ka dib wax uun khibrad qiiro leh oo xoog leh. Dhimashada qof aad jeceshahay, kala tagitaan ama furitaan, dhibaatooyin dhaqaale iyo xitaa khibrad aad u wanaagsan.
Jir ahaan weyn stress wuxuu kaloo kicin karaa cudurka wadnaha ee jaban. Dhaawac jirka ah ama qalliin, neefsashada oo ku dhaca iyo infekshannada ayaa ah tusaaleyaal walaac jireed oo gacan ka geysan kara cudurka wadnaha ee jaban, daraasadda ayaa xustay.
Daraasadda cusub waxaa ku jiray kaliya qiyaastii dadka 1,600 ee qaba xanuunka wadnaha ee jaban. Kaqeybgaleyaasha ayaa lagu qoray xarumaha caafimaadka ee 26 sagaal dal oo kala duwan, oo ay ku jiraan sideed waddan oo Yurub ah iyo Mareykanka.
Kuwa ka mid ah kuwa lagu soo sheegay kansarka, badankood waxay ahaayeen haween (88%) da'dooda celcelis ahaan waxay ahayd 70.
Dhacdooyinka kiisaska kansarka waxay u badan tahay in la filayay, ayuu yidhi Templin. Taasi waxay run u ahayd labada jinsi iyo dhammaan da 'kasta. Tusaale ahaan, 44%, heerka laga filayo kansarka waa 0.4%, laakiin kuwa qaba xanuunka wadnaha jabtay waxay ahayd 8%. Ragga 45 illaa 64 sano jir, heerka laga filayay kansarka wuxuu ahaa 2%, laakiin kuwa qaba xanuunka wadnaha jabtay, waxay ahayd 22%. Ragga iyo dumarka labadaba, kiisaska kansarka ee la filayay way ka badnaayeen waxa laga filan lahaa kuwa qaba cudurka wadnaha ee jaban.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.webmd.com/cancer/news/20190717/can-a-broken-heart-contribute-to-cancer